Wacom baasaboorka Spark Review - Rule News
Wacom baasaboorka Spark Review
The Spark Wacom baasaboorka waa yar muuqaalada iska ka weyn. Fikradda waa codka - dhigi dambe ee suufka smart si aad u isticmaali kartaa warqad kasta oo.
nidaamka warqad cusub Graphics gaare kiniin ee raad stroke qalinka aad waraaq caadi ah J5 iyo waxa soo saarka sida image ah, PDF, text ama khad digital, laakiin ma u dhigma karaa tartamaya
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Wacom baasaboorka dib u eegis Spark: qalin iyo warqad la tricks digital” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Friday 8-dii April 2016 06.00 UTC
The Spark Wacom baasaboorka waa isku day ugu horeysay-dajiye stylus ee ah in la sameeyo buugayga ah hybrid warqad diiwaan feegaar iyo Doodles aad foomka a digital.
Waa maxay sababta stylus iyo naqshadeynta saaraha loox samaynta nidaam qalin? Sababtoo ah warqad uu dareensan yahay iyo u dhaqmo si galaas ee shaashadda ama dusha of loox duwan iyo dad badan waxay door bidaan, laakiin aad weli dooneyso nuqul digital aan haysan si ay door biday in ay baaritaano ama sawiro.
Qaar kale ayaa isku dayay inuu arrintan loo sameeyo, laakiin Wacom waxaa la isticmaalayo habka xiiso kale si ay u tartameen. Spark baasaboorka ayaa muhiimad ahaan waa laba wax: qalin caadiga ah-raadinta iyo Gudidda smart in uu haystaa suuf caadi J5 warqad.
Qalinka ayaa u dhaqmo sida wax qalin caadiga ah; waxa kaliya wax yar ka sii dhumuc weyn. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Si ka duwan Smartpen Livescribe ah 3, ma aha qalinka ama warqad taas smart, laakiin suufka hoose warqada: waxay muraayad u scrawls sida stroke digital.
Waxaa ka shaqeeya iyadoo laga arko dhaqdhaqaaq qalinka iyo qaar ka mid ah dareen cadaadis on bogga, iyaga kaydinta ee xasuusta iyo iyaga wareejinta via Bluetooth si app Spark dhir dheer ee macruufka ah ama Android smartphone ama kiniin.
Inaad shaqo aad qalinka bogga samayn, ka dhacay badhan iyo sanamkii waxaa dijital kaydsho ka dib. Markaas waxaad u tagi kartaa bogga iyo dib u bilowdo. Waxaad isticmaali kartaa ficil ahaan qoyaan kasta J5 in aan waa mid aad u qaro weyn – suufka bixisey waa 30 sheets, laakiin suufka 50-sheet ah ayaa sidoo kale ka shaqeyn doonaan. Waa differentiator ugu weyn Spark baasaboorka ee ay ka gaareen farsamooyinka kale ee la mid ah: ugu baahan yihiin warqad gaar ah si ay ula socdaan dhaqaaq aad.
Cirib biiro on hoose iyo LED muujiso cagaaran in uu kuu sheego waxa uu ku shaqeeya oo waxba la diiwaan on bogga. LED The jirsado buluug markii suufka ayaa la ogaado qaar ka mid ah feegaar iyo buluug dhalaalaysa markii qalinka taabto warqada.
Waa wax badan ka sahlan yahay tartanka, taas oo labada wanaagsan iyo kuwa xun ee qiyaas siman.
Gudidda The xiray in ay sii warqada, qalinka, suuf iyo qalab la ilaaliyo, waayo, jidka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
waxoogaa ugu fiican waa in qalinka uu dareensan yahay sida caadiga ah, sida qad wax yar ka weyn. Laakiin waxaa kale oo uu dareensan yahay in xoogaa cheap, cap qalinka mar walba ma joogi on dhamaadka marka la isticmaalo iyo waxaad bedeli kartaa kaydadka qad kaliya – ma waxaad isticmaali kartaa qalinka aad ugu jeceshahay.
Waa wax laga xumaado waxa kaliya ma dareemaan ma wax yar gooyeen, siiyey waa gabal qaali ah ee technology.
Gudidda in ay dareento in si fiican sameeyey, laakiin waa wax weyn, waayo, sida buugayga yar – iyo J5 noqon karaan kuwo ay hawadu ku for qaadashada note iyo sawirka. Waxay leedahay jeebka warqada yar qalinka, ay hayaan clip ah, jeebka ah ee shabaqa soo qaatay warqad iyo xajinta a magnetic in ay iyaga ku hay meel.
version The waxaan baari lahaa waxa Wacom ku baaqay in a "jeebka qalab", laakiin qaar kale waxay leeyihiin clip kiniin ah oo ku lifaaqan oo kale oo laga yaabaa in ka badan oo faa'iido leh qaar ka mid ah.
Qoraalka on suufka dareensan dabiiciga ah, laakiin bulk ee inta kale ee Gudidda ka heli kartaa oo ay jidka ku. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Waayo, qaadashada qoraalada ku qoran nidaamka si fiican u shaqeeyo. Dhammee page a, dhufatey button oo hagaagsan la app. From waxaa aad dhoofin kartaa qoraalada lagu qoray sida qoraalka isticmaalaya aqoonsi far, sida image JPG ah, sida PDF ama sida Wacom khad Lakabka Language a (Dardaaranka) fayl for dhoofinta in ay barnaamijyadooda kale ee taageeraya format ku duugay digital.
The baasaboorka app Spark, ugu yaraan on Android, aan aad u fiican oo heer sare. Waxa kaliya ee aad dhoofin karo hal bog waqti, taas oo ka heli kartaa niyad, iyo aqoonsiga qoraalka, halka uu ku soo dhaweynayo, ma aha ilaa par leh xafiiltamaan. Waxaa si joogto ah i siiyey gobbledygook xataa aan far neatest.
images ayaa sidoo kale dhoofiyo Evernote sida ku lifaaqan, images aan gundhig, la kordhin ah ".null" ma JPG, taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay si ay gacanta ay magaca si aad u hesho in ay si fiican u soo bandhigaan oo ay u dib-u-dari in note si aad u hesho waxa ay u muujiyaan in-line.
The qoraallada dhoofiyo image ah, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah upticks qalaad on dhamaadka warqado, taas oo iska cad waa qaar ka mid ah raadraaca khaladka ah qalinka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Sawirda on suufka J5 uu dareensan yahay sida barbaro on kale, kaliya la bulk waxoogaa dheeraad ah oo ka soo dejiyeen Gudidda ku wareegsan. Sawir by Cheryl Pilbeam. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Nidaamka taageertaa dareen cadaadiska, laakiin xaqiiqda kaliya samatabbixiyaa la adag ama cadaadis ah oo dhexdhexaad ah. Khadadka Light ma is soo gaaray, taas oo ka dhigaysa sawir wanaagsan ka yara dhacay iyo daahid; user uusan ogayn in khadadka ah in si cad u yihiin la arki karo bogga ayaa si sax ah ku qabteen ama ma.
Fujiyaan sidoo kale waa halkii binary. Haddii line a ayaa soo gaaray, Khadadka sii badan hogaanka si fudud u keeni in midabka block, taas oo aan had iyo saamaynta ay doonayaan iyo sida xaqiiqada ah ma fikiri ma waxa la arki karo bogga.
Lines waxaa dabagal run, Si kastaba ha ahaatee, haddii bogga ma guurto, taasoo la micno ah ay sida toos ah ama geesba sida aad gacanta ku maamuli kartaa waa. Laakiin bogga ma dhaqaaqo, oo waa in la qabtaa hoos haddii kale stroke yihiin qabsadeen ka mid ah line la sawirka, taas oo soo afjari karo in daadsanaanta.
image la dhoofiyo si cad u ka maqan badi stroke qalinka fududee, halka warqad uu wax yar ka wareejiyay halka barbaro, samaynta khadadka qaar ka mid ah ka muuqan oo ah meeshii. Sawir by Cheryl Pilbeam Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The Spark Wacom baasaboorka kharash £ 103 la mid jeebka qalab a, gacmo loox oo yar ama kiiska SNAP-taam ah waayo Air iPad ah 2. Waxaa la iman laba gulufyadii khad bedelka iyo buugayga 30-page oo tayo ahaan saboolka ah.
Tartanka nidaamyada sida ku Livescribe Smartpen 3 Black Edition kacaysaa £ 120, laakiin waxay u baahan yihiin warqad gaar ah laga bilaabo qiyaastii £ 3 buugayga iyo refills ujecel £ 1 kasta.
The Spark Wacom baasaboorka waa yar muuqaalada iska ka weyn. Fikradda waa codka – dhigi dambe ee suufka smart si aad u isticmaali kartaa warqad kasta oo. Laakiin suufka J5 waxaa arrin ku koobnayn, ku dhaqaaqdo keenaya arrimaha qoraalka iyo sawirada iyo app-dhinac oo garab ka, halkaas oo aad dhammaan qoraalada digital waxaa baaraandegi, ma aha ilaa xoq.
Si ka duwan tartamaya ma jirto awood duubo audio, aqoonsi far ma u Wanaagson, laakiin qalinka, halka dareemayaa waxoogaa cheap, Waa wax badan u dhow isagoo qalinka caadi ahayn ugu xafiiltamaan. Waxa kale oo ka mid ah xal ugu jaban la heli karo iyo inay awoodaan inay u dhoofiyaan si format duugay digital Wacom ayaa laga yaabaa inuu aad u faa'iido kuwa raadinaya in ay isticmaalaan in ka badan oo kaliya notetaking.
Iidooyinka: isticmaali kartaa warqad kasta oo J5, waayo-aragnimo qoraal hufan, fudud in ay ku kaydiso oo duugay kala iibsiga, Wacom dhoofinta khad Lakabka Language
Arrrimaha: suuf yar, Gudidda weyn, qalinka cheap-dareen, page dhaqaaqdo, Oo cod duubo, app kooban, dhoofinta noqon kartaa niyad
Paper kasoo horjeeddo saarka digital. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Livescribe Smartpen 3 dib u eegis Edition Black: Qalinka 2.0
iPhone 5 ee Scanner faraha Horeba Ma Ha ...
Apps, Qodobka, Qalab, Nolosha iyo style, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Technology, UK Technology
← Huawei oo soo saaraysa P9 iyo P9 Plus casriga ah in la Qaado on iPhone iyo Galaxy Ugu xiisaha Playstation 4 Ciyaaraha [hablahoodu] →